Nagu saabsan | Yiwu Muran Soo Dejinta iyo Dhoofinta Co., Ltd.
Yiwu Muran Import Oo Dhoofinta Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2009, iyadoo la mideeyay horumarka iyo iibka wada. Alaabtayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah burushka la isku qurxiyo, burushka la isku qurxiyo, isku qurxinta isbuunyada qurxinta, qalabka qurxinta, iyo alaabada kale ee la xidhiidha. Waxaan ku siinaa buraashka macaamiisheenna suuqa dusha sare. Iyada oo 90 shaqaale ah ay ka shaqeeyaan warshadeena, iyadoo loo marayo dadaalka shaqaalaheena, waxaan noqonay soo saare burush caan ah oo caan ah laguna kalsoonaan karo. Shaqooyin xirfad leh, kaliya ka faa'iideysiga agab bey'adeed u habboon, hirgelinta heer tayo buuxda oo lagu xakameynayo wax soo saarka, waxaan si isdaba joog ah isugu daynay sida ugu fiican ee aan u dammaanad qaadi lahayn tayada wax soo saarka heer sare. Iyada oo leh kooxda naqshadeeyayaasha xirfadleyda ah, waxaan bil walba soo bandhigeynaa 20 moodello cusub oo burush ah oo si dhow ula socda isbeddellada moodada. Waxaan awoodnaa inaan ku siino noocyo badan oo moodooyin ah qaabeyntaada, sidoo kale waxaan bixinnaa adeegga OEM iyo ODM. Kooxdayada iibka waxay si dhow ula socon doontaa horumar kasta oo amar kasta ah, waxay la socotaa wixii jawaab celin ah ee macaamiisheena iyo soo-jeedinta kadib bixinta, waxayna la xiriiri doonaan macaamiisha waxayna ka caawin doonaan xallinta arrimaha kasta. Shirkada MURAN waxay isu xilsaartay inay qanciso macaamiisheeda. Waxaan rajeyneynaa inaan kulashaqeyno waxtarka labada dhinac isla markaana aan wadajir u abuurno mustaqbalkeena ifaya.
Shirkadayadu waxay kaloo leedahay koox ku takhasustay dhoofinta ganacsiga ajaanibta, oo ka caawin kara macaamiisha inay iibsadaan alaabada loo baahan yahay, iibsadaan, dabagal, kormeer tayo leh, ballansasho, rarid iyo adeegyada kale ee dhoofinta.
Iyadoo la raacayo shuruudaha lagu aasaasayo nidaam ganacsi oo casri ah, Yiwu Foreign Trade Corporation waxay si firfircoon u fulisay dib-u-habeyn farsameyn gudaha ah waxayna sameysay qaab dhismeedka maamul shirkadeed oo saynis ah. Taakuleyn yar oo dowladdu siiso shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta
Waxaan leenahay tusaalaha suuqgeynta gaarka ah ee adduunka iyo xirfadaha adeegga oo dhameystiran. Iyadoo koox xirfadlayaal ah, maamul adag, alaabooyin iyo qalab aad u fiican, iyo aragti loo dhan yahay oo furan, kooxdu waxay ku dadaalaysaa inay abuurto "Quruxda Qurxinta Oriental iyo Haweenka". Quruxda iyo dhaqanka caafimaad ee quruxda reer galbeedka iyo quruxda bariga ayaa si qumman isugu darsamay, sameysanaya shakhsiyad aan caadi ahayn iyo qaab quruxda bariga. Aasaasihii quruxda badnaa iyo xiriiriyaha "Oriental Beauty" wuxuu had iyo jeer haweenka u abuuraa dhaqan cusub oo qurux bari ah.